मानव जीवन मा, कुकुर मित्र, सहायक, सुरक्षा गार्ड, एक सहयोगी बन्न सक्छ। शताब्दीयौंदेखि, कुकुर पक्ष छेउमा मान्छे संग, तिनीहरूलाई विश्वासीपूर्वक सेवा गर्न बस्ने गरेका छन्। कुकुर - मात्र पशु आफ्नो मास्टर त समर्पित छ। विश्वका मा कुकुर गर्न स्मारक हो किन भन्ने छ। रूस विभिन्न 15 भन्दा बढी आधिकारिक मूर्तिहरु छ शहर, इङ्गल्याण्ड 10 मेमोरियल्स दावा र अमेरिका मा विभिन्न जातिहरु को कुकुर को रूपमा धेरै 16 को रूपमा कांस्य मूर्तिहरू अवस्थित छ। स्मारक सिर्जना कारण सामान्य यार्ड पाल्तु जनावर र कमाल गरे र आफ्नो प्रतिभा वा लोयल्टी संग अरूलाई मारा कि कुकुर थिएनन्। युरोप मा, त्यहाँ कुकुर स्मारक जताततै छन् पाल्तु जनावर लागि चिहान छ। का सबै भन्दा प्रसिद्ध मेमोरियल्स सिक्न गरौं।
Togliatti 1. स्मारक विश्वासी Constantine। को नवविवाहितहरूका जीवन दावी जो एक भयानक दुर्घटना, पछि मात्र आफ्नो कुकुर द्वारा बाँचे। त्यो मिसिन मोडेल र रंग दुर्घटनाग्रस्त कार समान हुन् भनेर बैठक, आफ्नो मृत्यु राख्न आफ्नो मालिकहरूको लागि पर्खेको। स्थानीय एक विश्वासी कुकुर उपनाम Constantine दिनुभयो। उहाँले यो घर उहाँलाई फिर्ता हुनेछ भन्ने आशाले आफ्नो जीवन बाँकी बिताए। उहाँले7वर्ष पछि मृत्यु भयो। बासिन्दा तिनीहरूलाई देखाए जो Togliatti मा कुकुर, एउटा स्मारक लागि पैसा उठाएको यस्तो लोयल्टी कि र भक्ति। यो मूर्तिकला उहाँले बस्ने र कुकुर लागि पर्खेको जहाँ Crossroads, मा स्थित छ।
2. स्मारक र Pavlov गरेको कुकुर Laika-अन्तरिक्ष यात्री। जनावर मा प्रयोग को XX सताब्दी को विज्ञान लागि आदर्श गरिएको छ। धेरै जनावर वैज्ञानिक प्रगति को लागि आफ्नो जीवन दिनुभयो। सबैभन्दा तिनीहरूलाई बीच प्रसिद्ध Pavlov गरेको कुकुर सिकार थियो। उनको सम्झनाको प्रयोगात्मक चिकित्सा को संस्थान को चोकमा स्थित छ। Laika-प्रसिद्ध अन्तरिक्ष यात्री भ्रमण धरती कक्षा मानिसहरू त्यहाँ पठाइएको अघि। दुर्भाग्यवश, जनावर हुनत आफ्नो फिर्ती बस्थे र सुरु देखि 10 घण्टा र योजना छैन। सम्झनाको मा स्थित छ मास्को। स्मारक विज्ञान को नाम मा हत्या कुकुर, वैज्ञानिकहरू जनावर मा प्रयोग को चेतावनी दिए छ।
3. साहित्य कुकुर। क्रास्नोडार हृदय मामिलामा शुभकामना ल्याउन rumored छ जो एक कुकुर, प्रेम एक स्मारक छ। र अंग्रेजी च्यानल को किनारा मा Turgenev को कहानी मा पर्यो जो प्रसिद्ध म्यू-म्यू, एक डाली आंकडा लायक छ।
4 Pissing कुकुर। यस्तो स्मारक युरोप मा साथै रूस मा लगभग हरेक देशमा छन्। मुर्ति को प्रोटोटाइप बनेको कुनै विशेष कुकुर। यो एक स्मारक छ यार्ड कुकुर को, र सामान्य मा कुकुर एक आदर।
5 विश्वासी Hachiko - फिल्म को हिरो, तर वास्तविक कुकुर र जापान को धेरै लाखौं मूर्ति। यो जनावर को जीवन बलियो मुद्दा को एक पाहुना संग लिङ्क गरिएको छ। मालिक मृत्यु हुँदा, Hachiko उहाँलाई बिर्सन सकिएन, र उहाँले हरेक दिन काम भेटे ठाउँमा मा प्रतीक्षा गर्न छोडेनन्। Hachiko गरेको स्मारक उहाँले प्रतीक्षा थियो जहाँ रेल स्टेशन, आफ्नो जीवनको अन्तिम वर्ष मा erected थियो। उहाँले मृत्यु हुँदा, जापान शोक को एक दिन घोषणा।
धेरै देशहरूमा मानिसहरूले तर्क गर्न उपज थिएन कि कुकुर को अविश्वसनीय समर्पण देख्यौं। इटाली, प्रसिद्ध कुकुर FiDo, पोल्याण्ड को घर - बेलायतमा Jock - बबी। यी कुकुर को सबै अत्यधिक मानिसहरूले मूल्यवान र विश्वासी हुन सिकाउनुभयो छन् अचम्मको गुणहरू, तपाईंलाई मनपर्ने एक वफादार देखाए। स्मारक कुकुर हामीलाई आफ्नो गुणस्तर को सम्झाउने र हामीलाई अझ राम्रो बनाउन।
LASCAUX: प्रागैतिहासिक कला सिस्टिन चैपल
"गोल्ड कोस्ट - Thurloe" (अब्खाजिया): फोटो र समीक्षा
Plastunovskaya "Manor अन्तिम नाम": एक जटिल देश को वर्णन, र प्रदान सेवाहरू
पासपोर्ट को तत्परता चेक - सुविधाजनक र सरल!
जहाँ मिन्स्क मा ग बच्चा र पर्यटक, एक केटी संग एक पैदल लागि जान
प्रवेश स्तर स्मार्टफोन अल्काटेल एक टच Pixi पहिलो 4024D: समीक्षा, विनिर्देशों, समीक्षा
Breech र शीर्ष
कसरी छिटो र कुशलतापूर्वक ingrown calluses छुटकारा गर्न
मानिस के हो र त्यो धरती मा जीवित थियो के
लक्ष्य बारेमा चलचित्रहरू। सबैभन्दा प्रेरक चलचित्र सूची
कार विरोधी चोरी प्रणाली: विशेषताहरु, मूल्यांकन, समीक्षा, मूल्य
रूसी astrologer पावेल Globa: जीवनी, भविष्यवाणी
कृत्रिम फूल को तस्वीर: राम्रो र सजिलो